सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा सानो ग्रह बुध | Ratopati
सूर्यको सबैभन्दा नजिकको नातेदार बुध, जहाँ डेढ दिनमै वर्ष हुन्छ
personज्ञानमित्र exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २६, २०७६ chat_bubble_outline0
बुध ग्रह (Mercury) सौर्यमण्डलका समस्त ग्रहहरूमध्ये सूर्यको सबैभन्दा नजिकमा अवस्थित छ । सूर्यबाट यसको दूरी ५ करोड ७९ लाख ९ हजार १ सय किमी मात्र छ । पछिल्ला अध्यायमा तिमीहरूले पृथ्वी र सूर्यबीचको दूरीबारे पढ्यौ । कल्पना गर पृथ्वी सूर्यसँग बुध ग्रह जति नै नजिक भएको भए के पृथ्वीमा जीवन सम्भव हुन्थ्यो ?
अब विज्ञानलाइ थाहा छ कुनै पनि ग्रहमा जीवन हुनलाई त्यस ग्रह र मातृ ताराको दूरी एकदमै अनुकूल हुनुपर्छ । यस अनुकूल दूरीलाई 'ह्यभिटेबल ज़ोन' अथवा 'गोल्डीलॉक ज़ोन' भनिन्छ । सौर्यमण्डलमा भएका ग्रह मध्ये एउटा बाहेक अन्य कतै जीवन नहुनुको अन्य थुप्रै कारण मध्ये ती ग्रह र सूर्यको दूरी नै प्रमुख बाधाको रूपमा रहेको छ । पृथ्वीदेखि नजिकका ग्रह (बुध र शुक्र ग्रह ) मा सूर्यबाट आउने अत्यधिक तापका कारण जीवन हुने संभावना रहेन भने पृथ्वीदेखि टाढाका सबै ग्रहमा (मंगलदेखि वरुण ग्रहसम्म ) सूर्यबाट पुग्ने तापको कमीका कारण जीवन हुर्किने संभावना रहेन ।
अरु सबै ग्रहहरूले जस्तै बुध ग्रहले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्छ । यसको परिक्रमा पथ पनि दीर्घवृत्तीय नै छ । यस कारण यो कहिले सूर्यको नजिक हुन्छ त कहिले टाढा हुन्छ । सूर्यको नजिक हुँदा अपसौरको स्थितिमा बुध ग्रह सूर्यबाट ४ करोड ६० लाख १ हजार २ सय किमी दूरीमा हुन्छ भने उपसौरको स्थितिमा यो दूरी बढेर ६ करोड ९८ लाख १६ हजार ९ सय किमी पुग्छ । अपसौर र उपसौरको स्थितिमा सूर्य र बुध ग्रहबीचको दूरीमा डेढ गुनासम्म फरक हुन्छ ।
बुधले सूर्यको परिक्रमा गर्न जम्मा ८८ दिनको समय लगाउछ । अर्थात् बुधको एक वर्षमा जम्मा ८८ दिन हुन्छ । पृथ्वीको ३६५ दिनको तुलनामा यो निक्कै कम हो । यसको औसत परिभ्रमण गति ४७.८७ किमीप्रति सेकेण्ड रहेको छ ।
सौर्य मण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह हो बुध । यसको व्यास जम्मा ४८७९ किमी रहेको छ । अर्थात् हाम्रो चन्द्रमाभन्दा अलिकति मात्रै ठूलो छ बुध ग्रह । बृहस्पति ग्रहको चन्द्रमा गैनिमीड (५२६२ किमी ) र शनि ग्रह को चन्द्रमा टाइटन (५१५०किमी ) बुध ग्रहभन्दा ठूला छन् ।
बुधको सतह पनि पृथ्वी जस्तै ठोस (Solid ) छ । यसको सतहमा पनि हाम्रो चन्द्रमा झै ठूल्ठूला खाडल (क्रेटर ) छन् । यसको एउटा ‘कैलोरिस बेसिन ’ (Caloris Basin ) नाम गरेको 'क्रेटर' १५५० किमी व्यासको रहेको छ । बुध ग्रहमा अत्यधिक क्रेटर हुनुका पछाडि यहाँ धेरै उल्कापिण्ड खस्नु नै हो ।बुध ग्रह सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह भए पनि यसको घनत्व सबै ग्रहमध्ये दोस्रो नम्बरमा पर्छ । के तिमीहरुलाइ थाहा छ सौर्यमण्डलको सबैभन्दा बढ़ी घनत्व भएको ग्रह कुन हो ? तिमी बसेको पृथ्वी नै यसको जबाब हो ।
बुध अन्य सबै ग्रहहरूको तुलनामा सबैभन्दा तीव्र गतिले सूर्यको परिक्रमा गर्छ । माथि उल्लेख भएझै बुधमा एक वर्ष ८८ दिनको (पृथ्वीको दिनअनुसार) मात्रै हुन्छ । तर बुधको एक दिन भने पृथ्वीभन्दा निकै लामो छ । पृथ्वीले सूर्यको एक परिक्रमा गर्दा आफ्नो धुरीमा ३६५ फन्को पूरा गरेको हुन्छ । पृथ्वीले धुरीको एक फन्को पूरा गर्नु नै हाम्रो एक दिन (दिन +रात ) हुन्छ । पृथ्वीले पूरा गरेका ३६५ फन्को नै हाम्रो एक वर्षको अवधि हुन्छ । बुध ग्रहले भने सूर्यको एक परिक्रमा पूरा गर्दा आफ्नो धुरीको डेढ़ फन्को मात्रै पूरा गरेको हुन्छ । बुध ग्रहलाई आफ्नो धुरीको एक फन्को पूरा गर्न पृथ्वीको दिनको हिसाबले ५८.६४६ दिनको समय लाग्छ । अचम्म नमान बुध ग्रहको डेढ़ दिन मै त्यहाँको एक वर्ष पूरा भइसकेको हुन्छ । पृथ्वीका ५८ दिन बुध ग्रहको एक दिन बराबरी हुन्छ । हामी बुध ग्रहमा बसोबास गर्ने भएको भए प्रत्येक डेढ़ दिन नै नयाँ वर्षको उत्सव मनाउथ्यौं ।
बुधको सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने कक्ष (अर्बिट) पृथ्वीको कक्षभित्र भएकोले (शुक्र ग्रहको पनि) चन्द्रमाका माफिक यी दुबैको पनि सम्पूर्ण कला (Phases ) पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ । बुधलाई आकाशमा साँझ अथवा बिहानी पख मात्र देख्न सकिन्छ ।
बुध ग्रहबारे मानिसलाई ‘सुमेरियन’ कालदेखि नै थाहा थियो । कहिले यसलाई सूर्यास्तको तारा त कहिले सूर्योदयको तारा पनि भनियो ।
बुधको सतहमा अत्यन्त पातलो वातावरण छ, जुन मुख्य रूपले सौरवायुबाट आएका परमाणुले बनाउँछन् । तर ग्रह अत्यन्त तातो भएकोले यी परमाणु पनि उडेर अन्तरिक्षमा पुग्छन् । बुधको वातावरण सधै परिवर्तित भइरहन्छ ।
बुध ग्रहको सतहको तापमान माइनस १७३ डिग्री सेल्सियस देखि ४२७ डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ ।
अहिलेसम्म बुध ग्रहको कुनै पनि प्राकृतिक उपग्रह (चन्द्रमा) बारे थाहा भएको छैन । यसको सतहको गुरुत्वाकर्षण ३.७ मीटर/सेकेण्ड २ छ भने यहाँको पलायन वेग ४.२५ किमी/सेकेण्ड छ ।
बुध ग्रह सूर्यदेखि धेरै नजिक भएका कारण अत्याधिक प्रकाशित हुनाले यसको धरातलको नक्सा बनाउन ‘हब्बल टेलिस्कोप’ लाई गाह्रो हुन्छ । अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले यस ग्रहको ४५ प्रतिशत भागको नक्सा मात्रै बनाउन सकेका छन् । मानव निर्मित दुइटा अन्तरिक्ष यान ‘मैरीनर १०’ तथा ‘म्यासेन्जर’ ले बुध ग्रहको यात्रा गरिसकेका छन् ।
सूर्यसँग सरदर दूरी — ५,७९,०९,१०० किमी
नजिक हुदा अपसौरमा —४,६०,०१,२०० किमी
टाढा हुदा उपसौरमा — ६,९८,१६,९००किमी
सूर्य परिभ्रमण समय — ८७.९६९ दिन
सूर्य परिभ्रमण गति — ४७.८७किमी / से
उपग्रह (चन्द्रमा) — छैन
व्यास — ४,८७९ किमी
क्षेत्रफल — ७.४८ गुना दसको घात ७ किमी
आयतन — ६.०८३ गुना दसको घात १० घन किमी
द्रव्यमान — ३.३०२२ गुना दसको घात २३ किग्रा
घनत्व --- ५.427 ग्राम /घन सेंटीमीटर
सतहको गुरुत्वाकर्षण — ३.७ मीटर / से२
सतहको पलायन वेग — ४.२५ किमी / सेकेण्ड
अक्षमा परिभ्रमण समय — ५८.६४६ दिन (१४०७.५ घण्टा )
अक्ष को परिभ्रमण गति --- १०.८९२ किमी /घण्टा (३.०२६ मीटर /सेकेण्ड )
वायुमण्डल संघटन — ४२% अक्सीजन ( आणविक ), २९% सोडियम, २२% हाइड्रोजन (आणविक ), ६% हीलियम, ०.५% पोटेशियम एवम् अन्य तत्वमा आर्गन, नाईट्रोजन, कार्वनडाइअक्साइड, वाष्प, जेनान, क्रिटान र नियन रहेका छन् ।
सतहमा वायुमण्डलीय दाब — नाममात्र
Title Photo: https://scontent.fktm8-1.fna.fbcdn.net/